प्रकृतिमा देखिएको यो एक जन्तुले दुनियाँ चकित ! – Everest Pati
काठमाडौं । प्रकृतिमा त्यस्ता केहि चीजहरू छन्, जसको बारेमा हामीलाई कुनै जानकारी हुँदैन । त्यस्ता कुराहरु देख्दा हामीलाई अनौंठो लाग्ने गर्दछ । यस्तै घटना महाराष्ट्रको पालघरमा भयो । एक माछावालाले दुई टाउको भएको शार्कको बच्चा फेला पारेका छन् । त्यो माछालाई अत्यन्तै दुर्लभ मानिएको छ ।
सप्तपति गाउँका माझी (माछा पक्रिने व्यक्ति) नितिन पाटिलले यो सानो माछा आफ्नो जालमा फसाएका हुन् । शार्क माछाको दुई टाउको देखेर, उनी छक्क परेर फोटोहरू लिए अनी माछालाई पुनः समुद्रमा फेरि छोडेर आएका हुन् ।
वैज्ञानिकहरूको अनुसार यस दुर्लभ शार्कको दुई टाउको भएकोले आनुवंशिक समस्या हुन सक्छ । अहिले दुई–टाउको भएको शार्कका तस्विरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेका छन् ।
शार्क समात्ने माझीले भने, ‘हामी त्यस्ता साना माछाहरू खाँदैनौं, विशेष गरी शार्क, त्यसैले मैले यो अनौंठो लाग्यो, तर हामीले जे भए पनि फाल्ने निर्णय गर्यौं।’ पछि, माझीहरूले भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्का केन्द्रीय समुद्री मत्स्य अनुसन्धान संस्थान (आईसीएआर–सीएमएफआरआई), मुम्बईका अनुसन्धानकर्ताहरूसँग बच्चा शार्कको फोटो साझा गरेर यो खोज एकदम दुर्लभ जीवको रूपमा पुष्टि गरेका हुन् ।
आईसीएआर–सीएमएफआरआई वैज्ञानिकले भने, ‘हाम्रो रेकर्डले देखाउँदछ कि भारतीय समुद्री किनारमा दुईवटा टाउको भएको शार्क कमै मात्र रिपोर्ट गरिएको छ । नेशनल जियोग्राफिकका अनुसार सन् २०१८ मा हिन्द महासागरमा दुई टाउको निलो शार्क वंश पत्ता लागेको थियो ।’
काठमाडौँमा मात्र आज संक्रमण २३८८, देश भर त ??